arpkudk rEÅav;NrdKUolNrdKUom;awG aomif;aomif;jzjz BudKqdkMuwmudk
03-04-2012 04:41 AM
Originally Posted by eilay
ဟုတ်ပဗျာ....မနေ.က ဒီလောက်တော့ မဆိုးဘူး........ ဒီနေ. တော်တော် ဆိုးတယ်..................
အမေစု သတင်းတွေ သိချင်လို.၊ စောင့်ပီး တက်နေတာ............တော်တော် ကို စုတ်ပဲ့တယ် ကွန်နက်ရှင်က....
မနက်တုံးက လိုင်းစကျ..ကျခြင်းတုံးက .....ရတနာပုံပေါ်တယ်....ဖွင့်လို. ရသေးတယ်....ခန နေတော့ ...သူတို. ဆိုဒ်ပါ ဖွင့်လို. မရတော့ဘူး............
ဟိုးအရင်တုံးက...လိုင်းကျလဲ.. .mm နဲ. ဆုံးတဲ့ မြန်မာ အခြေစိုက် ဆိုဒ်တွေ ဖတ်လို. ရသေးတယ်...ခုတော့ Intranet တောင် မရတော့ဘူး..............
ဘယ်တော့များမှ မလိုရင် ...မလိုသလို...ထိန်းချူပ်ခံရတဲ့ အင်တာနက် သုံးရတဲ့ ဘ၀ကနေ လွတ်မလဲ မသိဘူး......
တကယ်ဆို.....အင်တာနက်၊ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးကို ပုဂ္ဂလိကပေးသင့်ပီထင်တယ်............
လုံခြုံရေးကို လဲ ထိရောက်အောင်..လုပ်လို.ရမယ်လို. ထင်ပါတယ်.....
ခုတော့...........အင်ဖရာ ဆိုတာကြီးပဲ ကြားနေရတာသိပ်မနိပ်လှ............အဲ့ဒါကြီး လုပ်ပေးပါ့မယ်..... လုပ်ခွင့်ပဲ ပေးပါဆိုတော့... မပေးဘဲ.....ဒါကြီးလက်ညှိုးထိုးနေတာ ကို ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်ပါ.....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...မနေ.က မန်းလေးမှာ ပြည်သူတွေ..ဟာ ..သူတို. ချစ်တဲ့ အမေစုကို တခဲနက်....ကြိုဆိုနိုင်ခဲ့တာ.ကိုယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ သဘောထားတွေကို အတိုင်းအတာ တခု အထိ..ဖော်ထုတ်လို. ရလာတာတွေကို သဘောကျပါတယ်.....
အမေစု ပြောသလို.......သတိထားပြီး အကောင်းမြင်ရမယ်လို. ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတိပေးနေမိတယ်.....
uRefawmf rEÅav;om; r[kwfygbl;/
'gayod [dkbufowif;rsm;rSm udk*g0l;wifxm;wJh yHkawGMunfhNyD;
b,fvdkrS raeEkdifvdkY 0ifa&;ygw,f/
uav;awGrsufESmay:u iHhwvifhvifh arQmfvifhjcif;awG...
omrefjynfolrsm;eJY ausmif;aet&G,fuav;i,fawG&JU yDwd t[kef w[kef;[kef;awG
tcsdKU yGifhtHxGufusvmwJh htaysmfvGefrIawG
tm;udk;wMuD; arQmfvifhwMuD; raMumufr0Hhwdk;a0SSUvmaewJh vlUvIdif;vHk;awG
'gawGudk trdt& yHk&dyfzrf; wifay;EkdifwJhtwGufvnf; aus;Zl;wifrdygw,f/
rEÅav;uawmh t&iftwkdif; pHjyrEÅav;ygyJAsm....
မန်းလေး ၈၂လမ်း ၂၇၊ ၂၈ ကြားမှာမီးလောင်နေတယ်လို့ကြားတယ်... မီးကများပုံရတယ်... အစ်မတွေအိမ်နဲ့နီးလို့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ မီးတောက်တွေတောင်မြင်ရတယ် အပေါ်ဆုံးထပ်ကစလောင်တာ အောက်ဆုံးထပ်ရောက်သွားပြီဆိုလားပဲ... မြန်မြန်ငြိမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်...
rEÅav;rsm; b,favmuf tkyfcsKyfol? pDpOfolaumif;ovJqdk ajymjyOD;r,f/
ta0;oifu ausmif;tyfwJh jyoemawmh rajymawmhbl;/ uRefawmfu enf;enf;yJ cHcJh&awmh rajymcsifawmhbl;/ t&rf;cH&wJh olawG &ifzGifh/
wpfvrf;armif;wJh tarmifwdkY armfawmfyDauawGvm;? pnfyifvm; ukef;ausmfrwuf& pnf;urf;udk vkyfwm/ 35 vrf;udk vkyfvdkufawmh [kwfygw,f/ 35 vrf; ukef;ay:rSm qdkifu,fr&dSawmh oGm;&wm aumif;wmaygh/ tJ 42 ukef;ausmfusawmh pnf;urf;xkwfjyD; rMumygbl; ukef;ausmfjyifw,fwJh/ rxl;ygbl;/ tJ'D ukef;ausmfu e*dkuwnf;u ydwfzdkYaumif;wm/ tzmwpf&m ukef;ausmfav/ jyD;&if 41 vrf; bufu wpfvrf;armif;wJh/ wpfvrf;armif;qdkawmh - uRefawmfwdkYrS ESpfvrf;vHk; wpfjydKifwnf; wpfcsdefwnf;rSm rS armif;r&wmvdkY uyfajym&rvdk jzpfwJh vrf;/ tay:u aeatmufqif;vnf; wpfvrf;yJ armif;ygw,f/ atmufuae tay:wufvnf; wpfvrf;yJ armif;wmygyJ/ aysmfaysmfMuD;udk jyHK;jyHK;MuD; oGm;aeMuwm/ armfawmfyDau &dSw,fqdkawmh &w,fwJh/ rzrf;bl;wJh/ jyefvSnfhcdkif;wmwJh/ wpfcgwpfavawmh rodovdkeJY oGm;vdkY&w,fwJh/
'Drdkua&pDrSm pnf;urf;awGyg ysufoGm;ovdkyJ/ igwdkY rEÅav; pnf;urf;&dSygapvkdY qkawmif;ygw,f/
မန်းသူ မန်းသား တွေ ကိုကျနော် အကူညီ တခု တောင်းချင် လို့ ဗျို့မန်းလေး ကကျနော် ကောင်မလေး ကို ကြောင် အရုပ်လေး ပါ ဆယ် ပို့ ပေး ချင်လို့အိမ်အရောက်အမြန်ချောပို့ ပေးတဲ့လ်ိပ်စာ နဲ့ ဖုန်း နံပါတ်လေးများ ၇ှိရင်ပြောပြပေးပါ လား ခညား ...ကျနော် ပို့ မယ့် နေရာက ရန် ကုန် က နေ မန်း လေး ကို ပို့ မှာပါ ဗျား ကားဂိတ်တွေ က အိမ်အရောက်မပို့ ပေး လို့ပါ ကူညီ ကြပါ ဗျား ..
တနင်္လာနေ့ မနက်မှာ မောင်သီဟ တယောက် ရွှေမန်း သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း... လူရင်းကြီးများ နှင့် မတွေ့ဆုံဖူးသေးသော မန်းလေး ကျု့ပစ်များနှင့် တွေ့ဆုံလိုပါကြောင်း....